यस्तो पो रहेछ कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुको रहस्य, गोप्य कुरा लिक भएपछि प्रचण्ड देउबाबीच झण्डै हात हालाहाल ! – hamrosandesh.com
यस्तो पो रहेछ कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुको रहस्य, गोप्य कुरा लिक भएपछि प्रचण्ड देउबाबीच झण्डै हात हालाहाल !
नेपाल विद्युत विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको जानकारी मंगलबार मात्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दियो । बैठकले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको निर्णय किन मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।अझै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङबारे प्रस्तावलाई कुनै चासो नदिएको भनिएको बेला एक्कासि नियुक्त भएको निर्णय सार्वजनिक हुँदा धेरैको चाँसोको विषय बनेको छ ।
सोमबार कुलमानको नियुक्तको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा एकछिन भनाभन नै भएको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ । देउवालाई अहिले नै कुलमान घिसिङलाई ल्याएर कुनै ठूलो उपलब्धि हुने नदेखेर उनलाई प्राधिकरण फर्काउने प्रस्तावबारे पछि निर्णयमा पुग्ने मुडमा थिए । तर, प्रचण्ड आफैँ बालुवाटार गएर दबाब दिएपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका हुन् ।
गत भदौ २८ गते प्राधिकरण प्रमुखबाट सेवा निवृत्त भएका कुलमानलाई देउवा सरकारले फेरि प्राधिकरणकै जिम्मेवारी दिएको हो । दुई दिन अघि सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लिएर गएकी थिइँन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त प्रस्तावमा कुनै छलफल गर्न मानेनन् । उक्त प्रस्ताव बैठकमा आए पनि कुनै छलफल वा निर्णय नभए पछि मन्त्री भुसाल निराश भएकी थिइँन् ।
बैठक सकिए लगत्तै मन्त्री पम्फा भुसालले हतार हतार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय नभएको जानकारी गराइँन् । मन्त्री भुसालको फोन आएलगत्तै प्रचण्ड खुमलटारबाट बालुवाटार पुगे । प्रचण्ड बालुवाटार पुग्दा बैठक सकिएर केही मन्त्रीहरु फर्की सकेका थिए ।तर, प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग कुलमानको नियुक्तको किन निर्णय नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा झोक्किँदै प्रचण्ड लाई भने, “अहिले कुलमान भन्दा मन्त्रीपरिषद बिस्तार गर्नु जरुरी हो । खै तपाईहरु ले बिस्तार गर्न दिएको रु“
देउवा र प्रचण्ड बीच एकछिन यहि विषय मा भनाभन भयो । हात हालाहालको स्थिती पनि आयो । तर अन्त्यमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाएर बैठक सकिएपछि उक्त प्रस्तावमा निर्णय गर्न लगाएका थिए । प्रचण्ड आफैँ बैठक कक्ष मा पसेर माइन्युट लेख्न लाएर कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न लगाएर खुमलटार फर्किएका थिए ।स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले कुलमानलाई नियुक्त गर्ने रहर भन्दा पनि प्रचण्डको दबाबका कारण बैठक पश्चात बाध्य भएर निर्णय गरेका थिए । मन्त्री पम्फा भुसाल र प्रचण्डलाई सामाजिक संजाल र जनतामा लोकप्रियता हुने लोभले हतार हतार कुलमानलाई नियुक्त गर्न लगाएको धेरैको बुझाइ छ । अनलाईनमार्ग बाट